Sanatarrada Koonfur Galbeed Matala Oo War Kasoo Saaray Xaaladda Baydhabo – Kalfadhi
Sanatarrada Koonfur Galbeed Matala Oo War Kasoo Saaray Xaaladda Baydhabo
Xildhibaannada Dowaldda Federaalka ku matala Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwa Aqalka Sare ka tirsan ayaa soo saaray war ay uga hadlayaan xaaladda Koonfur Galbeed, warkooda ayaana waxa uu u dhignaa sidaan:-
Senatarrada Dowladda Federalka ku-matalaayo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayagoo kaduulaayo dhibaatooyinkii ay horey uga digeen ee xaladaha Amni, Siyaasadeed, waxaa ay soo saareen qodobbada soo socda:
Tacsi: Senatarada waxaa ay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhamaan ehellada dadkii ku geeriyoodey dhibaatadii maanta ka dhacday Magaalada Baydhabo waxayna u rajeynayaan inta ku dhaawacantay inuu Alle u boogo dhayo Insha Allah.
Afduub: Waxaa wax laga xumaado ah Af-duubkii maanta magaalada Baydhabo loogu geystey Sheikh Mukhtar Robow oo kamid ahaa musharaxiintii sida sharciga ah u buuxisey shuruudaha musharraxnimo ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana DFS kadalbaneynaa in ay xuriyaddiisu dib ugu soo celiso si uu Doorashada lafilaayo uga qeyb galo.
Doorashada: Kusimaha Madaxweynaha, Gudoonka, Guddiga Doorashada, xildhibaannada KG iyo Dhammaan daneeya-yaasha Doorahada KG waxaan usoo jeedineynaa in dib loo dhigo Doorashada ilaa iyo inta laga helaayo jawi xasilloon oo suurta gelin kara doorasho xur iyo xalaal ah.
Ciidanka AMISOM: waxaa wax laga xumaado ah in ciidanka AMISOM ee Ethiopia ay kudhex milmaan siyaasada Soomaaliya gaar ahaan tan Koonfur Galbeed, loona adeegsado faragelinta iyo dhibaatada ay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku hayso arrimaha Doorashada Koonfur Galbeed.
Gaba-gabadii: waxay Senatarrada ugu baaqayaan shacabka Koonfur Galbeed in ay is dejiyaan, ilaashadaana midnimadooda, iyo xasilloonidooda iskana ilaaliyaan in iyaga loo adeegsado burburinta Maamulkooda.
Imaanshiyaha Madaxweynaha Ereteriya oo Muqdisho laga dareemay